မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ မြင့်မားစေရန်အတွက် For Her Myanmar ၏ Women of Tomorrow- II - For her Myanmar
မြန်မာအမျိုးသမီးများ၏ လုပ်ငန်းခွင် စွမ်းဆောင်ရည်တို့ မြင့်မားစေရန်အတွက် For Her Myanmar ၏ Women of Tomorrow- II
လုပ်ငန်းခွင်မှာ တိုးတက်လာစေဖို့ အတွေ့အကြုံဗဟုသုတတွေ အများကြီးရနိုင်မှာပါနော်
နေ့ရက် – ဇွန်လ (၃၀)ရက်၊ တနင်္ဂနွေနေ့
အချိန် – နေ့လည် (၂:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၀၀) အထိ
နေရာ – Park Royal Hotel, Yangon
ရန်ကုန်၊ ပြည်ထောင်စုသမ္မတမြန်မာနိုင်ငံ – ဇွန်လ ၂၉ ရက်၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ် : For Her Myanmar (ပျိုမေတို့ကမ္ဘာ) မှ ဇူလိုင်လ (၃)ရက်နေ့တွင် ကျရောက်မည့် မြန်မာအမျိုးသမီးနေ့ကို ဂုဏ်ပြုသောအားဖြင့် Women of Tomorrow- II (Myanmar Women in International work environment)ပွဲကို ဇွန်လ (၃၀)ရက် (တနင်္ဂနွေနေ့)၊ Park Royal Hotel တွင် နေ့လည်(၂)နာရီ မှ ညနေ (၄)နာရီထိ ကျင်းပပြုလုပ်သွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်မှာ မြန်မာအမျိုးသမီးများ အနေဖြင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် ဝင်ရောက်လုပ်ကိုင်သည့်အခါ သိသင့်သိထိုက်သော အကြောင်းအရာများ နှင့် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမည့် အကြောင်းအရာများကို သိရှိပြီး ကမ္ဘာ့အလယ်၌ မြန်မာအမျိုးသမီးတို့၏ စွမ်းဆောင်ရည် ပိုမို မြင့်မားစေရန် ဖြစ်ပါသည်။
အဆိုပါ Women of Tomorrow -II ပွဲကို Yoshi milk drink, Fair & Lovely, La Source Spa, Supradyn နှင့် Vitara တို့က Gift bag sponsor များအဖြစ် ပါဝင်ကူညီ ပံ့ပိုးပေးထားပါသည်။
ပွဲအကြောင်း အသေးစိတ်သိလိုပါက>>> http://bit.ly/2WK7oFQ
Myanmar Women in International work environment ပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်အတိုင်း မတင်မိုးလွင် ၊ Laura Cho(Career Coach ) နှင့် Arabelle Yee (International Speaker, Clinical Psychotherapist) စသည့် သက်ဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းခွင်များတွင် အသီးသီး ထူးချွန်ထက်မြက်ကြသော အမျိုးသမီးများမှ ဦးဆောင်ဆွေးနွေးသွားမည်ဖြစ်ပြီး ၎င်းတို့ ကြုံတွေ့ခဲ့ရသော နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင် အတွေ့အကြုံများ၊ ပြင်ဆင်ခဲ့ရသည်များနှင့် နိုင်ငံတကာ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ မြန်မာအမျိုးသမီးများ သိသင့်သိထိုက်သည်တို့ကို မျှဝေပေးသွားမည် ဖြစ်ပါသည်။
ပွဲတက်ရောက်ရန်အတွက် ဤလင့်ခ်တွင် >> http://bit.ly/2wHd6Jf ကြိုတင် စာရင်းသွင်းထားနိုင်ပါသည်။
For Her Myanmar အကြောင်း
For Her Myanmar ဆိုတာ မြန်မာအမျိုးသမီးထုအတွက် နိစ္စဓူဝ အကျိုးရှိစေမယ့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ယုံကြည်မှု အပြည့်နဲ့ ဘဝကို ဖြတ်သန်းနိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့နည်းလမ်းတွေ အသိပညာဗဟုသုတတွေ အကြောင်းအရာတွေကို ဝေမျှပေးနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုဒ်ဖြစ်ပါတယ်။ For Her Myanmar ကို ၂၀၁၆ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၂)ရက်နေ့မှာ စတင်ခဲ့ပါတယ်။
Related Article >>> ဖုန်းဘက်ထရီက ဘာလို့ ခဏခဏ ကုန်နေရတာလဲ?
နေ့စဉ် ပျိုမေတို့အတွက် စိတ်ဝင်စားဖွယ် အကြောင်းအရာများကို ယူဆောင်လာပြီး နေ့စဉ်ဘဝမှာ အသုံးဝင်စေမယ့် ကုန်ပစ္စည်းတွေကို မိတ်ဆက်ပေးသွားမှာပါ။
ကျန်းမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပ်အကိုင်၊ အလှအပ၊ ကျားမရေးရာ ခွဲခြားမှုဆိုင်ရာ စသဖြင့်သော ဆောင်းပါးတွေ အပြင် စာရေးသူတွေရဲ့ အတွေ့အကြုံတွေ ဟာသအဖြစ်အပျက်လေးတွေ ဝတ္ထုတိုလေးတွေ ဝေမျှရေးသေားပေးနေတဲ့ ဝက်ဘ်ဆိုက်ဒ်လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ဆောင်းပါးတွေသာ မဟုတ်ဘဲ ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ကိုယ်တိုင်ပြုလုပ်ဖန်တီးပြီး တင်ဆက်ပေးနေပါတယ်။
DiDi ( For Her Myanmar)
လုပျငနျးခှငျမှာ တိုးတကျလာစဖေို့ အတှအေ့ကွုံဗဟုသုတတှေ အမြားကွီးရနိုငျမှာပါနျော
နရေ့ကျ – ဇှနျလ (၃၀)ရကျ၊ တနင်ျဂနှနေေ့
အခြိနျ – နလေ့ညျ (၂:၀၀) နာရီမှ ညနေ (၄:၀၀) အထိ
နရော – Park Royal Hotel, Yangon
ရနျကုနျ၊ ပွညျထောငျစုသမ်မတမွနျမာနိုငျငံ – ဇှနျလ ၂၉ ရကျ၊ ၂၀၁၉ ခုနှဈ : For Her Myanmar (ပြိုမတေို့ကမ်ဘာ) မှ ဇူလိုငျလ (၃)ရကျနတှေ့ငျ ကရြောကျမညျ့ မွနျမာအမြိုးသမီးနကေို့ ဂုဏျပွုသောအားဖွငျ့ Women of Tomorrow- II (Myanmar Women in International work environment)ပှဲကို ဇှနျလ (၃၀)ရကျ (တနင်ျဂနှနေေ့)၊ Park Royal Hotel တှငျ နလေ့ညျ(၂)နာရီ မှ ညနေ (၄)နာရီထိ ကငျြးပပွုလုပျသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
ပှဲ၏ ရညျရှယျခကျြမှာ မွနျမာအမြိုးသမီးမြား အနဖွေငျ့ နိုငျငံတကာ လုပျငနျးခှငျမြားတှငျ ဝငျရောကျလုပျကိုငျသညျ့အခါ သိသငျ့သိထိုကျသော အကွောငျးအရာမြား နှငျ့ ကွိုတငျပွငျဆငျထားရမညျ့ အကွောငျးအရာမြားကို သိရှိပွီး ကမ်ဘာ့အလယျ၌ မွနျမာအမြိုးသမီးတို့၏ စှမျးဆောငျရညျ ပိုမို မွငျ့မားစရေနျ ဖွဈပါသညျ။
အဆိုပါ Women of Tomorrow -II ပှဲကို Yoshi milk drink, Fair & Lovely, La Source Spa, Supradyn နှငျ့ Vitara တို့က Gift bag sponsor မြားအဖွဈ ပါဝငျကူညီ ပံ့ပိုးပေးထားပါသညျ။
ပှဲအကွောငျး အသေးစိတျသိလိုပါက>>> http://bit.ly/2WK7oFQ
Myanmar Women in International work environment ပှဲ၏ ရညျရှယျခကျြအတိုငျး မတငျမိုးလှငျ ၊ Laura Cho(Career Coach ) နှငျ့ Arabelle Yee (International Speaker, Clinical Psychotherapist) စသညျ့ သကျဆိုငျရာ လုပျငနျးခှငျမြားတှငျ အသီးသီး ထူးခြှနျထကျမွကျကွသော အမြိုးသမီးမြားမှ ဦးဆောငျဆှေးနှေးသှားမညျဖွဈပွီး ၎င်းငျးတို့ ကွုံတှခေဲ့ရသော နိုငျငံတကာ လုပျငနျးခှငျ အတှအေ့ကွုံမြား၊ ပွငျဆငျခဲ့ရသညျမြားနှငျ့ နိုငျငံတကာ လုပျငနျးခှငျအတှငျးရှိ မွနျမာအမြိုးသမီးမြား သိသငျ့သိထိုကျသညျတို့ကို မြှဝပေေးသှားမညျ ဖွဈပါသညျ။
ပှဲတကျရောကျရနျအတှကျ ဤလငျ့ချတှငျ >> http://bit.ly/2wHd6Jf ကွိုတငျ စာရငျးသှငျးထားနိုငျပါသညျ။
For Her Myanmar အကွောငျး
For Her Myanmar ဆိုတာ မွနျမာအမြိုးသမီးထုအတှကျ နိစ်စဓူဝ အကြိုးရှိစမေယျ့ ကိုယျ့ကိုယျကိုယျယုံကွညျမှု အပွညျ့နဲ့ ဘဝကို ဖွတျသနျးနိုငျဖို့အတှကျ လိုအပျတဲ့နညျးလမျးတှေ အသိပညာဗဟုသုတတှေ အကွောငျးအရာတှကေို ဝမြှေပေးနတေဲ့ ဝကျဘျဆိုဒျဖွဈပါတယျ။ For Her Myanmar ကို ၂၀၁၆ ခုနှဈ ဖဖေျောဝါရီလ (၂)ရကျနမှေ့ာ စတငျခဲ့ပါတယျ။
Related Article >>> ဖုနျးဘကျထရီက ဘာလို့ ခဏခဏ ကုနျနရေတာလဲ?
နစေ့ဉျ ပြိုမတေို့အတှကျ စိတျဝငျစားဖှယျ အကွောငျးအရာမြားကို ယူဆောငျလာပွီး နစေ့ဉျဘဝမှာ အသုံးဝငျစမေယျ့ ကုနျပစ်စညျးတှကေို မိတျဆကျပေးသှားမှာပါ။
ကနျြးမာရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး၊ အလုပျအကိုငျ၊ အလှအပ၊ ကြားမရေးရာ ခှဲခွားမှုဆိုငျရာ စသဖွငျ့သော ဆောငျးပါးတှေ အပွငျ စာရေးသူတှရေဲ့ အတှအေ့ကွုံတှေ ဟာသအဖွဈအပကျြလေးတှေ ဝတ်ထုတိုလေးတှေ ဝမြှေရေးသေားပေးနတေဲ့ ဝကျဘျဆိုကျဒျလညျး ဖွဈပါတယျ။ဆောငျးပါးတှသော မဟုတျဘဲ ဗီဒီယိုတှကေိုလညျး ကိုယျတိုငျပွုလုပျဖနျတီးပွီး တငျဆကျပေးနပေါတယျ။
Tags: Event, For Her Myanmar, women of tomorrow
Song Hye Kyo ဆီကနေ တရားဝင် ကွာရှင်းခွင့် တောင်းခံလိုက်တဲ့ Song Joong Ki
စစ်မှုထမ်းကာလပြီးဆုံးလို့ အနုပညာလောကထဲ ပြန်လည်ခြေချတော့မယ့် Kim Soo Hyun
Yin Sandi Ko June 28, 2019
Wathun July 5, 2019
ပျော်စရာလည်းကောင်း၊ ဗဟုသုတနဲ့ လက်ဆောင်တွေလည်း အများကြီး ရခဲ့ရတဲ့ For Her Myanmar ရဲ့ “Her Beauty, Her Choice” Event
Wathun June 3, 2019
For Her Myanmar မှ ကြီးမှူးကျင်းပသည့် “Her Beauty, Her Choice” ပွဲအား ဖိတ်ကြားခြင်း
Wathun May 31, 2019
ခြောက်သွေ့ပျက်စီးနေတဲ့ ဆံကေသာအတွက် အသင့်တော်ဆုံးဆီကို ဘယ်လိုရွေးချယ်မလဲ?
Wathun May 30, 2019
ဒီတစ်ပတ် ပိတ်ရက်မှာ ဘယ်သွားရမယ်မှန်းမသိ ဖြစ်နေသူတွေအတွက် မင်မင် အလင်းပြလိုက်ပါပြီနော်..
Yin Sandi Ko May 21, 2019
ဒီတစ်ပတ်ပိတ်ရက်မှာ ယောင်းတို့ကို ဗဟုသုတ တိုးပွားစေနိုင်မယ့် ပွဲ(၃)ပွဲ
Yin Sandi Ko May 15, 2019